Real Estate Listings: » Residential homes » Condos » CA » Ontario » Mississauga » 2702 - 70 Absolute Avenue, Mississauga, Pa L4z0a4 | Iimpawu # 30772291 - J & d1
Ikhowudi yeposi: L4z0a4
Wamkelekile kwi-Avenue eyi-Absolute Avenue. Eli gumbi lokulala li-2 elimangalisayo, igumbi lokuhlambela li-2 uCondo likhona kumgangatho we-27 onemibono entle yeSixeko. Ihlala ngaphaya kwesitrato isuka kwi-Square One, kwi-City Hall, eSheridan College kwaye ikumgama nje ongekho kuThuthwayo noHola wendlela. Izinto ezinobumnandi zibandakanya iphuli yangaphakathi / yangaphandle, iThubhu eshushu, iGym, inkundla yeBhasikithi, inkundla yamatyala, indawo yokupaka iindwendwe kunye nokunye okuninzi. Incwadi eboniswa namhlanje! Nceda uvumele inqaku lama-24 labaqeshi. Ifumaneka ngoJanuwari 1, 2020! (id: 27) Iimpawu zangaphakathiZinye iiNdawo eziPhakathi zoMlilo: akukho luhlobo lwePropathi: iiCondos
Ibhaliswe kwi 1. Jan 2020
Nxibelelana nentengiso 647.223.xxxx
Ibhaliswe kwi January 1, 2020